बलात्कार पीडितको यो कठिन न्यूड दृश्य कसरी गरियो शुटिङ ? हिरोइनले आफैं बताइन् हेर्नुहोस भिडियो - Nepal Drishti
बलात्कार पीडितको यो कठिन न्यूड दृश्य कसरी गरियो शुटिङ ? हिरोइनले आफैं बताइन् हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौं। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री अमाला पल अहिले आफ्नो फिल्म आदाइका कारण चर्चामा छिन् । यो फिल्ममा आमालाले उक बलात्कार पीडित युवतीको भूमिका निभाएकी छिन् । फिल्मको स्क्रिप्टको मागका कारण यो फिल्ममा अमालाले न्यूड दृश्य पनि दिनुपर्यो । यो दृश्य पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । अमालाले यो दृश्यको बारेमा बताएकी छिन् ।
अमालाले द हिन्दूसँग कुरा गर्दै भनिन् ‘मैले निर्देशक रत्ना कुमारसँग सोधेकी थिएँ कि सिन कस्तो हुनेछ किनकि शुटिङभन्दा पहिले म धेरै चिन्तित थिएँ । मलाई यो कुराको भिन्ता थियो कि कसरी सबै हुन्छ, सेटमा शुटिङका बेला कति मान्छे हुन्छन् । शुटिङका बेला १५ जना थिए । मलाई पूरै टिममाथि भरोसा थियो त्यसैले यो सिन गर्न सकें ।’ हेर्नुहोस् टिजर ﻿
फिल्मको टिजर रिलिज भएसँगै चर्चामा छ । सामाजिक संजालमा यो सिनलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । केहीले सामाजिक संजालमा ट्रोल गरे पनि केही सेलिब्रेटीले अमालाको कामको तारिफ गरेका छन् । न्यूड सिनको विषयमा आएका प्रतिक्रियाप्रति लक्षित गर्दै अमालाले फिल्म हेर्नुभन्दा पहिल्यै जज गर्ने बानी खराब भएको बताइन् । यो सत्य घटनामा आधारित फिल्म भएको उनले जानकारी दिइन् ।
July 9, 2019 11:38 am | चलचित्र